दशैंतिहार लक्षित सहुलियत पसल आजदेखि सञ्चालन, के-केमा कति दिने भयो छुट ? - Aarthiknews
मंगलबार, १३ फागुन २०७६ Tuesday, 25 February, 2020
दशैंतिहार लक्षित सहुलियत पसल आजदेखि सञ्चालन, के-केमा कति दिने भयो छुट ?
काठमाडौं । नजिकिँदै गरेको दसैं र तिहारलाई लक्षित गर्दै सरकारले सोमबारबाट काठमाडौं उपत्यकासहित देशका ७३ स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याउने भएका छन् । चाडपर्वका बेला उपभोक्ता ठगिने कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका ९ ठाउँसहित देशका मुख्य सहरमा ७३ वटा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याउने भएको हो ।
यस्ता पसल भदौ २३ गते देखि कात्तिक १६ गतेसम्म सञ्चालनमा आउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । वाणिज्य विभागका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा कालिमाटी, कोटेश्वर, टेकु, सिंहदरबार, सतुंगल, ललितपुर, भक्तपुर लगायत ९ ठाउँमा सहुलियत पसल हुनेछन् । त्यसैगरी, साल्ट ट्रेडिङले काठमाडौं उपत्यकामा तीनवटा घुम्तीसहित ११ वटा पसल सञ्चालन गर्ने छ भने उपत्यका बाहिर २४ वटा पसल सञ्चालनमा आउने भएका छन् ।
काठमाडौं उपत्यका बाहिर बनेपा, बिर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, लाहानलगायत मख्य सहरमा साल्ट ट्रेडिङको सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नेछ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले २३ स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडकी प्रवक्ता सर्मिला न्याउपाने सुवेदीले जानकारी दिइन् । सहुलियत पसलमा चामल, गेडागुडीदेखि मासु समेत सहुलियत मुल्यमा पाइने जानकारी सुवेदीले दिइन् ।
सहुलियत पसलमा नुन, चामल, चिनी, गेडागुडीदेखि मासुसमेत सहुलियत मूल्यमा पाइने छ । सुपथ मूल्य पसलमा मोटा चामलमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ, नुनमा दुई रुपैयाँ, मसिनो चामलमा तथा गेडागुडीमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट पाइनेछ । त्यस्तै, च्यांग्रा र खसी बोकामा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट दिइने सुवेदीले बताइन् । खाद्यले यसपटक २ हजार च्यांग्रा र १ हजार खसी–बोका बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको समेत जानकारी दिइन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले काठमाडौं उपत्यकामा ५ र उपत्यका बाहिर १८ वटा पसल सञ्चालन गर्ने प्रवक्ता सुवेदीले बताइन् । । खाद्य व्यवस्थाले थापाथली, नख्खुलगायतका कार्यालयमा चिनी, फापर र सिमीमा छुट दिनेछ भने खसी बोका थापाथली कार्यालयमा बिक्रीका लागि राखिने बताइन् । मन्त्रालयका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले २४ र दुग्ध विकास संस्थानले १५ स्थानमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नेछन् ।
साल्ट ट्रेडिङले प्रतिकिलो नुनमा २ रुपैयाँ र चिनीमा ५ रुपैयाँ छुट दिनेछ । दुग्ध विकास संस्थानले प्रतिकिलो घिउमा ५० रुपैयाँ र पनिरमा १० रुपैयाँ छुट दिनेछ ।
कालीमाटी, जावलाखेल, कोटेश्वर, सूर्य्विनायक, बनेपालगायतका कार्यालयमा साल्ट ट्रेडिङले गेडागुडीलगायत चिनी र नुनमा छुट दिनेछ ,डीडीसी घ्यू ५० रुपैयाँ र पनिरमा प्रतिकिलो १० रुपैयाँ छुट पाइनेछ भने चिनीमा प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ सहुलियत दिने तयारी छ।
दुग्ध विकास संस्थानले काठमाडौं उपत्यकामा ४ र उपत्यका बाहिर ११ वटा ठाउँमा सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने जनाएको छ ।
एनआइसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई सोनी ब्राभिया टिभी किन्दा १० प्रतिशत छुट
डिप्रोक्स लघुवित्तको १५ प्रतिशत लाभांश शेयरधनीको बैंक खातामा
बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडको बीओके सहज बचत खाता सार्वजनिक
धुञ्चेमा बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्नेक्रम बढ्दै
घट्यो मुलुकको निर्यात, यस्तो छ कारण
नेपालमै छ यस्तो ठाउँ जहाँ विवाहित छोरीलाई पनि अंश दिइन्छ
कोरियामा कोरोना भाइरसको त्रास, ८०० संक्रमित आठ जनाको मृत्यु
नागढुंगा–नौबीसे सुरुङमार्ग: सरकारकै असहयोगले लागत र समय बढ्दै
स्वामित्व परिवर्तनसँगै खिम्तीको पीपीए नेपाली रुपैयाँमा